I-Ulcerative Colitis: Unyango olutsha lokuPhila lunikezelwa ngokuthe ngqo emathunjini
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Ulcerative Colitis: Unyango olutsha lokuPhila lunikezelwa ngokuthe ngqo emathunjini
I-Second Genome, inkampani ye-biotechnology ephakamisa iqonga layo lobunikazi i-sg-4sight ukuze ifumane kwaye iphuhlise unyango oluchanekileyo kunye ne-biomarkers, ibonise idatha ye-preclinical evela kwinkqubo yayo yokuphulukisa i-mucosal kwisifo samathumbu esivuthayo (IBD) kwi-IBD ye-IBD ye-Crohn's & Colitis Foundation: Uphuhliso lweMveliso Inkomfa yeCrohn's & Colitis® yabanjwa nge-18-19 kaNovemba, kwaye yabhengeza ubulungu bayo beSangqa seCorporate isithuba seminyaka emithathu.
I-SG-5-00455, umgqatswa weziyobisi okhokelayo weNkampani kwiprogram yophuhliso lwechiza kunye ne-biomarker kwi-IBD, inokuba ngowokuqala kwiklasi yonyango ephucula ukuphiliswa kwe-mucosal kwizigulane ze-IBD. I-SG-2-0776, iprotheni ye-novel, yenziwe kwi-L. lactis inkqubo yokuhanjiswa kweziyobisi, i-SG-5-00455, ukuhanjiswa ngokuthe ngqo, okungeyona inkqubo kwi-gut. Ukuphulukiswa kwe-Mucosal yinjongo ephambili yonyango ye-IBD kwaye okwangoku ibekwe ngoogqirha njengeyona mfuno ephezulu engafanelekanga.1
Inkampani yanikezela intetho, "Iiprotheyini ezincinci ezincitshisiweyo kwizigulane ze-UC zisebenzisana ne-matrix engaphandle kunye nokukhuthaza i-mucosal homeostasis," ngexesha leseshini yepowusta yokuphuma ngoNovemba 18.